ဒိုမီနီကာနိုင်ငံ၏ တည်နေရာ (circled in red)
the Western Hemisphere အတွင်း
၁ မတ် ၁၉၆၇
၃ နိုဝင်ဘာ ၁၉၇၈
၇၃,၅၄၃ (အဆင့် - ၁၈၆)
နာမည်ပြောင်အဖြစ် ကရစ်ဘီယံကျွန်းသေးလေး ("Nature Isle of the Caribbean") ဟုအမည်ရသော ဒိုမီနီကာသည် သဘာဝအလှအပများ မပျက်စီးသေးပဲ ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ လက်ဆားအန်တီလီးစ်ကျွန်းစု (Lesser Antilles) တွင် အသေးငယ်ဆုံးတိုင်းပြည် ဖြစ်သည်။ ဘူမိဗေဒသဘောအရ မီးတောင်လှုပ်ရှားမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာရသောတိုင်းပြည် ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာ့ဒုတိယအကြီးဆုံး ရေပူကန်ကြီး သည် ဒိုမီနီကာကျွန်းတွင် တည်ရှိသည်။ တောတောင်ထူထပ်သည်။ မိုးသစ်တောများ ပေါများသည်။ ရှားပါးအပင်၊တိရစ္ဆာန်၊ ငှက်မျိုးစိတ်များကို တွေ့ရသည်။ အနောက်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင်ခြောက်သွေ့ပြီး ကုန်းတွင်းပိုင်းတွင် မိုးရွာသွန်းမှု များပြားသည်။ တော်ဝင်အမေဇုန်ဆစ်ဆဲရိုးကြက်တူရွေးငှက် (Imperial Amazon|Sisserou Parrot) သည် ဒိုမီနီကာ၏ ထူးခြားသော ဝိသေသ ဖြစ်သည်။ ဒိုမီနီကာ အမျိုးသားအလံတွင် ယင်းကြက်တူရွေးငှက်ကို အသုံးပြုထားသည်။ ဒိုမီနီကာ၏ စီးပွားရေးသည် ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများပေါ်တွင် မှီတည်လျှက် ရှိသည်။
ခရစ္စတိုဖာကိုလံဘတ်စ် (Christopher Columbus) က ယခုဒိုမီနီကာကျွန်းကို ၁၄၉၃ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၃)ရက်နေ့တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ထိုနေ့ကိုအစွဲပြု၍ အမည်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ လက်တင်ဘာသာစကားအားဖြင့် ဒိုမီနီကာဟူသည်မှာ တနင်္ဂနွေနေ့ ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည်။ ကိုလံဘတ်စ် တွေ့ရှိခဲ့ပြီး နောက် နှစ်ရာချီပြီး ကြာသည့်တိုင်အောင် ဒိုမီနီကာကျွန်းသည် သီးခြား တည်ရှိနေခဲ့သည်။ ဥရောပမှ ရောက်ရှိလာကြသော ကိုလိုနီနယ်ချဲ့များ၏ မောင်းထုတ်ခံရသော ဒေသခံ ကရစ်ဘ် (Caribs) များသည်ပင် ယင်းကျွန်းသို့ ရွှေ့ပြောင်းလာခြင်း မရှိခဲ့ပေ။ ၁၇၆၃တွင် ပြင်သစ်တို့က ဒိုမီနီကာကျွန်းကို အင်္ဂလိပ်တို့ထံ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ၁၈၀၅တွင် အင်္ဂလိပ်တို့က အစိုးရအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပြီး ကိုလိုနီအဖြစ် အုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။
Coat of Arms – Government of the Commonwealth of Dominica။
Dominica Ethnic groups 2001 Census။ Cia.gov။ 2013-09-29 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Pew Forum Research Data 2010 Archived 24 September 2015[Date mismatch] at the Wayback Machine. Page 46. ဒီဇင်ဘာ 2012. Retrieved 28 May 2017.
2011 POPULATION AND HOUSING CENSUS (PDF)။ 29 ဩဂုတ်လ 2017 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
Dominica။ International Monetary Fund။
2015 Human Development Report။ United Nations Development Programme (2015)။ 14 December 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"One woman's fight to get David Dimbleby to correctly pronounce Dominica"၊ 12 November 2014။